Budata Piaggio P180 Avanti FSX-Ọzọ & P3D - Rikoooo
Mario Noriega - Eagle Rotorcraft anwale
Ugo ihe ngosi nke Eagle Rotorcraft na-ewetara gị, Piaggio P-180 Avanti, nke Mario Noriega chepụtara ugbu a, ghọrọ onye ala nna. FSX nlereanya na dakọtara Prepar3D v4.5 +. Ihe ngwugwu a nwere otutu ihe omuma, ime VC, ogwe aka nke 2D, igwe okwu di elu, na ihe ndi ozo. FSX atụmatụ akọwapụtara.
Self shadowing, akpọ ụkwụ n'ihe map, na specular map
11 elu àgwà, reflective liveries
Custom FDE, ụda mkpọ, panel, ma VC
Nwalere n'ime Windows Vista / 7 na DX9, nakwa dị ka DX10 preview nyeere. Arụ ọrụ kwesịrị dị Windows XP.
Onye edemede: Mario Noriega - Eagle Rotorcraft anwale
Concorde RW Akwukwo Igbo FSX & P3D